Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Brazil Roberto Firmino Child Story Plus Na-emeghị Ihe Nkọwa Na-adịghị Agbanwe
LB na-egosi Full Life Story of a Football Star kasị mara aha na aha njirimara; 'Bobby'.
Anyị Roberto Firmino Storymụaka Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha nke Brazil Footballer na Liverpool Pressing Machine gụnyere akụkọ ndụ ya tupu ama aha ya, ndụ ezinụlọ ya na ọtụtụ obere amaara ama gbasara ya.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ebumnuche ya na-emetụta ikike mana mana ole na ole na-eleba anya na Roberto Firmino biography biography nke gụnyere ịmụtakwu gbasara ndụ ezinụlọ ya na ibi ndụ ya.
Ndụ nke onye egwuregwu bọọlụ na mpụga pitch bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a na-enweghị n'ihu adieu, ka anyị bido.
Akụkọ nke Roberto Firmino - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
A mụrụ Roberto Firmino Barbosa de Oliveira na ụbọchị 2 nke Ọktoba, 1991 na Maceio Alagoas, Brazil, site n'aka ndị nne na nna, José Roberto Cordeiro (nna) na Mariana Cícera Barbosa de Oliveira (nne).
Dika nwatakiri, ndi na-eto eto bu ihe nchebe site na ndi nne na nna ya. A na-echebe ya na òtù ndị omempụ egbe mpụ jupụtara mpaghara Maceio.
As DailyMail tinye ya, nne Roberto Firmino na-ekpughe na ọ machibidoro nwa ya nwoke ịhapụ ụlọ ya dị ka nwatakịrị n'ihi na ọ tụrụ egwu na ya ga-eso ndị omempụ a ma ama na mpaghara ya. Ọ tụrụ egwu n'okporo ámá dị oke egwu.
Ọ sịrị: "Achọrọghị m Roberto ka ọ pụọ ma kpọọ egwu n'ihi na ọ dị ize ndụ n'okporo ámá.
Naanị ka a hapụrụ ya ka o soro nna ya nọrọ ya nso mgbe ọ na-azụ ahịa mmiri. José Roberto Cordeiro rere karama mmiri n'okporo ámá nke Maceio.
Ego ole enwetara bụ ihe ezinụlọ na-adabere na nri na nlanarị. Nwa ya nwoke enweghị mmasị na azụmaahịa ahụ mana bọọlụ.
Roberto na-eto eto chọtara ụzọ iji mee ka football ya guzosie ike, na-esi n'ụlọ ha wusiri ike na-agbapụ site na iji isi ihe pụrụ iche ya mee iji nweta ọnụ ụzọ ámá.
Nne ya, Mariana kwukwara, sị: "Ọ ga-ebili n'isi ụtụtụ mgbe m na-ehi ụra iji na-egwu bọl, mee ka obere mkpọtụ dị ka o kwere mee ma wụda mgbidi ahụ."
Dika odi, Firmino bu ihe nkpagbu. Mgbe ọ dị obere nke 8, ọ cheworị ụzọ iji pụọ na ịda ogbenye.
Ndị mụrụ ya maara na ịchọta ya n'ụlọ ga-ebelata ohere ọ ga-enweta iji nwee ihe ịga nke ọma.
Ha nyere ya nnwere onwe igwu naanị bọọlụ n'okporo ámá, na-ekele ndị agbata obi kwuru…"Hapụ ya, a mụrụ ya na talent, ihe ịga nke ọma ya bụ ohere anyị nwere iji pụọ na ịda ogbenye na nhụsianya"
na a DailyMail N'ajụjụ ọnụ nne Firmino, Mariana kpughere nwa ya nwoke ozugbo 'ihi ụra na-ejide bọl ya' mgbe agha ọ bụla siri ike n'ọhịa.
Firmino mụtara banyere ndụ n'ụzọ siri ike. N'oge ahụ, a na-eji ya agbazinye ego iji nweta ọzụzụ.
Roberto Firmino Biography - vinghapụ Street:
Site n'enyemaka nke Luiz, otu onye na-eduzi na club CRB ya, Roberto Firmino gbapụrụ na 14 na-agba ọsọ.
Luiz kwuru, sị: “Ezinụlọ Roberto dara ogbenye ma dị umeala n'obi. Ọ ga-egwu n'ụkwụ ụkwụ ya. Mgbe mbụ ọ bịara klọb, nna ya enweghị ọrụ.
Naanị ihe o mere bụ ijikwa obere azụmaahịa ya nyere ezinụlọ ya nri. N'ihi ya, akwụrụ m nwata ahụ njem na mmefu, nyere aka na ngwa ya wee kpọrọ ya gaa egwuregwu.
Ọ bụ nwa toro ogologo ma dịkwa jụụ nwata mana ọ na-aga n'okporo ụzọ. Ahụla m ndị na-eto eto ka ha na-atụ mgbere ọgwụ ọjọọ na izuru ụgbọala. Ama m na o meghị nke ọ bụla n’ime ihe ndị a.
Luiz gara n'ihu…“N’ime minit ole na ole mbụ ọ nọrọ n’ọhịa, amaara m na ọ ga-abụ kpakpando. Ebere m ákwá mgbe m nụrụ na a kpọrọ ya ka ọ kpọọ Brazil.
Enwere m obi ụtọ maka ya, ịhụ na o mezuola ihe m tụrụ anya ya na ihe ọ rọrọ. Ọ na-agwa m mgbe niile na ọ bụ nrọ ya ịghọ otu n'ime ndị na-agba ọsọ ụkwụ na Brazil kacha mma. ”
Na 16, Roberto bịanyere aka na Tombense, 1,600 kilomita site n'ụlọ. E zigara ya na Figueirense nke abụọ, nke 1,000 kilomita na ndịda.
Mama ya kwuru na agụụ ụlọ gụrụ Roberto - nke kpatara ọtụtụ nsogbu nye ezinụlọ ya
Ọ sịrị: “Ọ kpọrọ m ọtụtụ ugboro na-achọsi ike ịlaghachi n’ụlọ. 'Mama, bia kuta m enweghi ike iwe nke a ozo !.
Ezinaụlọ niile bere akwa ma o bere akwa mana anyị enweghị ego iji kpọlata ya.
Firmino nwere ike ichere ruo ọnwa ole na ole rue mgbe ọ ritere nnukwu ego iji gaa n'ụlọ. O tinyere obere ihe o nwere n'ụlọ na nri '
Firmino kpaliri obi ya maka ụlọ ọrụ nke abụọ ya, Figueirense. Ọ tụrụ anya ọrụ ebube nke mechara bịa. A na-atụle nke a n'okpuru ebe a.
Roberto Firmino Biography Eziokwu - Ọganihu:
Ọ bụ onye German scout họpụtara Roberto Firmino mgbe ọ rụchara ọrụ dị egwu maka ụlọ ọrụ Brazil. Nke a hapụrụ ezinụlọ ya n'ọ inụ dị ukwuu.
Ọ kwagara ọtụtụ puku kilomita site n'ụlọ ya gaa Germany mgbe ọ dị afọ 16 iji gaa n'ihu ọrụ ya na Germany. Ozugbo o nwetara ozi ọma ahụ, ọ sịrị; 'Ezinụlọ m agaghị arụ ọrụ ọzọ.'
Roberto mere ihe niile hbu ndi ezinulo soro ya na Germany. Eccentric ya ejiji ejiji malitere iputa n'oge a.
Ndụ Ezinụlọ Roberto Firmino:
Ọ bụ ihe niile ha nwere. José Roberto Cordeiro (nna) na Mariana Cícera Barbosa de Oliveira (nne) bụ nne na nna nke Roberto Firmino. Ha si n'ezinụlọ dara ogbenye.
Ndị nne na nna Roberto Firmino: José Roberto Cordeiro (nna) na Mariana Cícera Barbosa de Oliveira (nne).
Nne nke onye ọkpụkpọ ahụ, kwuru na ya tetara n'ụtụtụ Sunday wee gaa uwe elu ahụ Firmino ji mee ihe na mbụ ya maka mba ahụ gaa Mass.
Nke a bụ akụkọ ya.
“Mgbe m rutere Mas, onye ọ bụla nọ na-ele m anya n'ihi wntị. Emere m nnọkọ ikpe ekpere maka ya tupu egwuregwu mba ya.
Mgbe mass got finished, m ngwa ngwa gara na-ekiri ya na TV. Mgbe nwa m banyere n'ọkara nke abụọ ma merie ya, ọ fọrọ nke nta ka m nwụọ site na obi ịhụ ihe mgbaru ọsọ ahụ na ememe ya.
Agwara m ya na ekwentị mgbe egwuregwu ahụ megide France. O kwuru, sị, 'Gịnị bụ ihe, mama?' m wee sị, 'Nwa m, ị karịrị akarị.'
Nne nke onye mmegide ahụ, Cícera Barbosa de Oliveira, enweghị obi abụọ ọ bụla banyere ịga nke ọma nwa ya nwoke ma dọọ aka ná ntị na ụwa ka ga-ahụ ihe kacha mma. Ọ gwara nke Brazil Ozi SporTV.
Roberto Firmino Larissa Pereira Storyhụnanya Akụkọ:
A maara kpakpando Brazil maka igosipụta talent ya na nA pụọ na pitch.
Onye nlereanya Brazil bụ Larissa Pereira bụ nwa agbọghọ nwere obi ụtọ nke meriri obi Roberto Firmino. Ọ zutere ya na ụlọ ịgba egwu na-ewu ewu na Brazil na 2013.
Ndị na-ahụ n'anya ịhụnanya na-egosipụta foto na soshal midia nke onwe ha na-esusu ọnụ, na-arụ ọrụ ma na-eyi uwe dabara adaba.
NDỊ BỤGHỊ: Roberto Firmino mere ihe ngosi karịa mgbe ọ na-ekwu na Larissa na Instagram, na ozi ndị hapụrụ ọtụtụ ndị kweere na foto a bụ mgbe ha mechara bụrụ ịhụnanya.
Roberto na-amagharị maka igwefoto ahụ mgbe ha na-ekpuchi iko mmanya na Larissa wee susuo ya ọnụ. O dere, sị: "Ezigbo oyi na ịhụnanya nke ndụ m".
Larissa zara ya, sị: "Ị na-esi ísì kacha mma n'ụwa. Ụbọchị zuru okè. Ahụrụ m gị n'anya nke ukwuu".
Ma, Roberto gbagwojuru anya ka ọ chọpụta na ọ na-egbochi ọnyà iji belata ike nke ahụ Larissa tupu ya ebute ya. Ọtụtụ narị puku ndị na-eso ụzọ hụrụ foto ahụ tupu ya eburu ya.
Onye nhazi mbu ya, Luiz Guilherme Gomes de Farias, 57, gwara Sun na Sunday: “A makwaara ya nke ọma na Brazil maka ụdị ejiji ejiji ya na nwunye mara mma dịka amamihe ya.
Ndị Liverpool ga-ahụ ya n'anya. Ya na nwunye ya na-eweta ọmarịcha ebe ọ bụla ha na-aga. ”
Birdshụnanya nnụnụ kekọtara eriri na 2015 obere oge mgbe ọ bịarutere Liverpool FC. Alụmdi na nwunye ahụ mere na obodo Firmino nke Maceio, Brazil.
Roberto Firmino na-agbanwe nwunye ya na nwunye ya.
Ụbọchị tupu ihe omume ahụ Larissa nyere ozi gbasara mmetụ ya na di ya n'ọdịnihu nke o dere, sị: “Ahọrọ m gị ma họrọ gị otu puku ugboro.”
Firmino esonyere nne ya, Mariana Cícera gaa ebe ịchụàjà ahụ.
Roberto Firmino mama m na-eje ije ya ka ọ gbanwee.
Na ndị otu Liverpool Philippe Coutinho, Lucas Leiva na Allan Souza nile na-abịa na-agba àmà ma na-eri oge obi ụtọ ahụ.
Roberto Firmino Nwoke Kachasị Mma na Ndị Ikom.
Ọ bụ Philippe Coutinho rụrụ ọrụ kachasị mma.
Foto foto Roberto Firmino
Mgbe di na nwunye ahụ kwere nkwa ha, kpakpando Brazil bụ Gabriel Diniz nyere ọtụtụ ndị ọbịa ntụrụndụ.
Ndị otu egwu na-akwado ya na ndị na-akwado ya, ndị wepụrụ usoro ịgba egwu egwu.
Mgbe agbamakwụkwọ ahụ gasịrị, ọtụtụ ndị ọbịa gara na mgbasa ozi mmekọrịta iji bulite foto na vidiyo nke ihe omume ahụ.
N'okpuru ebe nrụọrụ weebụ haziri iji zụta onyinye maka nwunye nwoke na nwanyị, ha gwara ndị ọbịa ha ka ha nye ego iji rịọ maka ọgwụ gbasara Miguel Enrique, nwa nwoke dị afọ abụọ si Santa Catarina, onye na-arịa ọrịa Spinal muscular atrophy, ọrịa ọrịa degenerative .
Mgbe ememe ahụ, ndị lụrụ ọhụrụ lụrụ otu ntụrụndụ n'elekere abalị niile site na ụfọdụ n'ime aha kachasị aha na ụlọ ọrụ egwu Brazil gụnyere Wesley Safadão na Thiaguinho.
O teghị aka tupu ngọzi nke alụmdi na nwunye abịa. Di na nwunye ahụ hụrụ ọmụmụ nwa mbụ ha aha ha bụ Valentina Firmino.
Nwa nwanyi Roberto Firmino, Valentina.
Ka oge na-aga, di na nwunye ahụ nwere nwa nwanyị ọzọ ha kpọrọ Bella.
Ezinụlọ Roberto Firmino.
Eziokwu nke Roberto Firmino:
Fọdụ ndị na-agba ụkwụ na-ahụ n'anya n'ahụ [Tattoos]. Anyị ahụwo ụfọdụ ndị egwuregwu dị ka Arturo Vidal, Marcos Rojo, Daniel Agger, Raul Meireles, Memphis Depay, MArtin Skrtel na ndị ọzọ.
Ndị ọzọ edere ama dị ka mara, Drinkwater, Mkhitaryan, Ousmane Dembele, Rashford, Chamberlain na Gabriel Jesus ka ga-abụ onye hụrụ egbugbu n'anya kpamkpam.
Firmino na-egbu egbu nke ukwuu ma na-edegara ezinụlọ ya akwụkwọ n'akụkụ ahụ ya.
Ọ nwere ọtụtụ egbugbu, gụnyere nke German nke na-agụ: "Ezinụlọ, akwụsịla ịhụnanya".
Firmino tinyere oge na Germany mgbe ọ na-egwu Hoffenheim - ya mere o yiri ka ọ na-egbu egbu n'oge ahụ ya. O nwere onye ọzọ, n'asụsụ Grik, n'elu obi onye Kraịst ji obi ọcha kwuo, sị: "Chineke kwesiri ntukwasi obi".
Obi abụọ adịghị ya na onye Brazil nwere akara egbugbu ya kachasị mma. Nke a bụ aha nwa ya nwanyị, Valentina Firmino.
Ogwe aka nri ya nwere ihe oyiyi nke nne na nna ya na ndị òtù ezinụlọ ya ma ọ kwetara na ebe nrụọrụ weebụ na-ekwu okwu 'Theka akara na ogwe aka ekpe enweghị ezigbo ihe ọ pụtara, mana m na-achọ ihe.
Ọzọkwa na aka nri ya, o nwere uhie uhie maka ịhụnanya, akwụkwọ mkpịsị akwụkwọ anọ dị ka akara nke chioma, akara ngosi udo na aka ya na afọ 1991 na mkpịsị aka ya - na-anọchite anya afọ a mụrụ ya. Ọzọkwa, okwu ịhụnanya bụ egbugbu na mkpịsị aka nke aka ekpe ya.
Ezi ihe egbu egbu Roberto Firmino
Firmino kwetara na akara aka na aka ekpe ya adịghị enwe ezi ihe ọ pụtara, ma kwuo na ọ na-achọ echiche ndị mechara bịa.
Mba Brazil n'oge na-adịbeghị anya gara Instagram iji gosipụta echiche kachasị ọhụrụ nke egbugbu kachasị ọhụrụ nke nwere ike ịbụ onyinyo nke nwunye ya - Larissa Pereira- na okwu ahụ 'ịhụnanya' etched n'okpuru.
Firmino depụtara ihe oyiyi ahụ 'seguimos rabiscando', nke sụgharịrị n'ụzọ nkịtị dika 'anyị na-eso doodling'.
Eziokwu Firdị Tattoo nke Roberto Firmino.
Ọ gaghị echefu, n'olu ya, o nwekwara "Deus" egbugbu n’olu ya, nke bụ Portuguese maka Chukwu.
Ọkpụkpọ egbugbu Roberto Firmino.
Ejiri ọtụtụ egbugbu mara ahụ onye Brazil ahụ nke gụnyere nke a pụtara 'Chineke' n'asụsụ Portuguese
Akụkọ akụkọ Roberto Firmino:
Onye Brazil ahụ ga - eme ka mmadụ atọ nke Liverpool nyere aka na XI kacha njọ. Ọrụ edozi edozi Firmino na Liverpool malitere nkwanye ugwu na ọbịbịa 2015 ya na Merseyside, nwere obere mkpụmkpụ na akụkụ.
Eziokwu nke Style Roberto Firmino.
Agbanyeghị, dịka ọ dị n'ụfọdụ ndị otu egwuregwu, Firmino ntutu n'ezie anabatala ọchịchị ọjọọ Jurgen Klopp.
Ụgbọ ala Roberto Firmino:
Roberto Firmino nwere red 180,000 na-acha uhie uhie Ferrari 458 Italia. Onye Brazil, onye uwe ya kwekọrọ na wiil ya, kesara onyinyo nke onwe ya banyere ịwụ elu n'azụ ụkwụ nke nnukwu supertali, nke nwere ike iru 202 mph na oge 0-60 nke naanị 3.4 sekọnd.
Ụgbọ ala Roberto Firmino.
Sense Roberto Firmino Echiche:
ROBERTO FIRMINO na nwunye ya bụ Larissa Pereira nwere ihe ọ ga - eme iji bụrụ ihe nkwụsị siri ike ebe a. Tupu ya abịarute na Merseyside, ha nwere ọtụtụ àgwà ndị dị mkpa iji merie egwuregwu kacha mma.
Ugbu a, ya na Larissa mara maka eserese ha na-etinye na uwe mwụda. Otu onye òtù ezinụlọ, onye na-achọghị ka a kpọ aha ya, kwuru, sị:
“Roberto na Larissa yiri - ha hụrụ ezigbo ndụ n'anya, ụgbọ ala na-agba ọsọ na ụlọ obibi dị mma. Ha dị ka David na Victoria Beckham.
Ọ maara nke ọma na ọ na-achọ ka ọ dabara adaba. Ha na-enwe ezigbo obi ụtọ ma na-adabara ibe ha. Ọ na-eme ka ọ daa n'ala ma ọ na-eguzosi ike n'ihe nke ukwuu. "
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, Roberto Firmino na-agagharị na-azụ ahịa ụlọ ahịa etiti na-agwa ndị mụrụ ya na otu ụbọchị, ọ ga-eyi uwe na ejiji ndị a niile.
Taa, a maara ya na ọ hụrụ ịzụ ahịa n'anya na iyi ụdị ọhụụ na usoro ọhụụ. Obi abụọ adịghị ya, ọ nwere ike imeli ya, ọ na-emebi onwe ya. Ọ na-ebi ndụ dị ebube.
Ga-ahụ ka obi si atọ ya ụtọ. Ọ na-enwe obi ụtọ. Ọ hụrụ vidiyo onwe ya ka ọ bụrụ abụ ma tinye ya na Instagram. Ugbu a ọ nwere ike ime ihe ọ bụla ọ chọrọ.
Ọ na-enwe mmasị ịgbanwe agba ntutu ya mgbe ọ bụla ọ chọrọ. Ọ na-ebi ụdị ndụ ọ na-echeghị na ọ ga-ebi.
Mgbe ọ na-ekwu okwu n'ọnwa Jenụwarị banyere ịhụnanya o nwere maka okomoko, Roberto kwuru, sị: “Ọ na-amasị m ịnwale ihe ọhụrụ. Ma eleghị anya, m bụ obere ihe efu. Enwere m akwa uwe. Styledị m dị mma ma nwee obi ike mgbe ọ na-ahọrọ ihe ị ga-eyi.
M na-achọ crazes dị iche iche na ịntanetị ma detuo ha ma ọ bụ were ihe m chọrọ ma mee ya nke m. Enwere m uwe mara mma.
Ana m agbalị ike ịke akara aka m ma na-emeziwanye ya kwa ụbọchị. Ọ bụ banyere ịkọwa onye m bụ na ịchọpụta ihe ga-adabara m na ihe na-amasị m. ”
Ugbu a Roberto, onye akwụ ụgwọ ya na Reds na-ekwu na ọ bụ £ 90,000 kwa izu, ga-eme ka ezinụlọ ya na-eto eto gaa Merseyside. O nweelarị akụ na ụba ya, ịzụrụ mama ya ụlọ obibi dị mma na Maceio.
Roberto Firmino Biography Eziokwu - yledị Egwuregwu Ya:
Roberto Firmino na-egwuri egwu dika onye na-egwu egwu, ma ọ nwekwara ike igwu egwu dị ka onye na-aga n'ihu, onye na-agba ọsọ ma ọ bụ onye na-eto eto. O nwere ikike iji ọsọ ya, njikwa chiri anya na ọhụụ ebe ọ bụla etinyere ya.
Ryan Babel, otu onye otu Firmino na Hoffenheim, kọwara ya dị ka “Onye aghụghọ”. Dị ka Dutch si kwuo, 'Firmino nwere ike dribble ma gbaa.
Ọ nwere nnukwu égbè. ọ nwere ike igwu ọtụtụ site na bọọlụ na enyemaka ya dị ezigbo mma. Ikike isi ya dịkwa aghụghọ. ” Babel kwukwara na Firmino nwere obi umeala na enweghị nsogbu na àgwà.
Nwoke a di egwu! Ana m ebi ndụ Bobbg firmino